Songandina Archives - Page 527 sur 1062 -
Lehilahy nisoratra indroa : Nidoboka am-ponja
21/02/2018 admintriatra 0
Lehilahy iray no naiditra am-ponja vonjimaika rehefa avy nisora-panambadiana indroa. Voararan’ny lalana, ary mampigadra ny misora-panambadiana indroa eto amin’ny firenena malagasy. Nihevitra angamba ity lehilahy ity fa tsy hisy hahafantatra ny zavatra nataony fa vitany …Tohiny
Vina 2030 napetraky ny Filoha : « Tokony hotohanana …»
20/02/2018 admintriatra 0
Manana mpikambana maro ankehitriny ny fikambanana Mamonjy ao Toamasina araka ny fanazavan’ny filohany Mamonjy Ratsimbazafy. Nanamafy ny fanohanany ny tetikasan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny tenany, izay filoha mitantana izany fikambanana izany. “ Vonona hanohana ny …Tohiny
Antsirabe : Andramena miisa 35 sarona tao anaty taxi-brousse
Noho ny fiaraha-miasa miaraka tamin’ny Zandary tao Antsirabe dia tratra ny bolabolan’andramena miisa 35 izay mirefy: 50cm-95cm ary ny diamètre dia 10cm-25cm. Araka ny fanadihadiana natao tamin’ny mpamily dia saika hamatsiana an-tsokotsoko ireo mpanao asa …Tohiny
Ambanin’Ampamarinana : Mbola misy ny trano tandindomin-doza
Ankoatra ireo trano miisa telo izay nianjeran’ny vatobe teny ambanin’Ampamarinana ny sabotsy alina lasa teo, dia fantatra fa trano manodidina ny 30 isa, izay ahitana mponina miisa 130 no mbola tandindomin-doza . Manoloana ny zava-nisy, …Tohiny
« 1 … 525 526 527 528 529 … 1 062 »